Nhau - Kwakajairika Kupenda, Electrostatic pfapfaidzo yekupfeka, Electrophoretic kupfeka
Normal Painting, Electrostatic pfapfaidzo unhani, Electrophoretic unhani
Kwakajairika Kupenda Electrostatic Spray Bemhapemha Electrophoretic bemhapemha
Round round ngetani enzira dzakasiyana dzekupenda, sei uye nei?
SCIC-cheni yanga ichipa maketani eround link neakasiyana ekumusoro epasi, senge inopisa yakatsikwa galvanization, magetsi galvanization, kupenda / kupfeka, kuzora mafuta, nezvimwe. Zvese izvi nzira dzecheni yekubatanidza kupera ndeyechinangwa chehupenyu hwakareba hwekuchengetedza, zvirinani uye zvakareba. anticorrosion panguva yeketani sevhisi, yakasarudzika kuzivikanwa kwemavara, kana kunyangwe kushongedza.
Neichi chidimbu chidimbu chechinyorwa, tiri kutarisa nzira dzakasiyana dzekupenda / kupfeka kwevatengi vedu.
Nzira nhatu dzekupenda dzakakurumbira nevatengi vedu pane dzakatengwa chiwanikwa simbi kutenderera chinongedzo ngetani:
Electrostatic pfapfaidzo unhani
Yakajairwa pendi inonyatso kuzivikanwa nemutengo wayo unoshanda uye nyore kubata, asi kushoma kunamatira mhedzisiro kune cheni yekubatanidza pamusoro kuenzaniswa nedzimwe nzira mbiri; saka ngatitaurei zvimwe pamusoro pedzimwe nzira mbiri dzekupfeka.
- Electrostatic pfapfaidzo unhani
Iyo ipurasitiki poda inobhadhariswa neakakwira-voltage magetsi emagetsi. Pasi pechiito chemunda wemagetsi, iyo yekumhara inosaswa pamusoro pechisungo checheni, uye hupfu huchafananidzwa kushambadzirwa pamusoro pechisungo cheketani kuti vagadzire poda kupfeka. Mushure mekupfekedzwa kweupfu kwakabikwa patembiricha yepamusoro ndokuzoenzaniswa uye kusimbiswa, mapurasitiki anonyungudika oita yekupedzisira yekudzivirira yekudzivirira ine mhedzisiro, uye inonamatira kumeso kwecheni dzinosunga
Hapana diluent inodiwa, uye maitiro acho haana kusvibiswa kune zvakatipoteredza uye hapana chepfu kumuviri wemunhu; Iko kupfeka kune kwakanakisa kutaridzika mhando, yakasimba kunamatira uye zvemagetsi simba; Nguva yekurapa yekumwaya ipfupi; Ngura kuramba uye vanopfeka nemishonga ari unhani vari zvikuru kumusoro; Hapana primer inodikanwa.
Mamwe mavara esarudzo uye kukwirira kwakakwirira. Kupfeka hakusi kwese kwakaenzana esp. ine nzvimbo dzinobatanidza nzvimbo yekubatanidza.
- Electrophoretic kupfeka
Chikamu cheketani chakanyudzwa mune yakaderera yevasungwa electrophoretic yekupfeka yekugezera izere nemvura seanode (kana cathode), uye inoenderana cathode (kana anode) yakaiswa mubhati. Mushure menguva yenguva yakatarwa yakabatana pakati pematanda maviri, yunifomu uye firimu yakanaka isina kunyungudutswa nemvura inoiswa pamusoro pezvisungo zvecheni.
Iine hunhu hwekusvibisa kwakadzika, kuchengetedza simba, kuchengetedza zviwanikwa, kudzivirira uye kurwisa-ngura, kupfeka kwakatsetseka, kudzivirirwa kwemvura kwakanaka uye kuramba kwemakemikari. Zviri nyore kuti uone mashandiro uye otomatiki eiyo yekumonera indasitiri. Iyo inokodzera kupfekedzwa kweanoshanda nemaumbirwo akaomarara, mativi, makona nemakomba.
Pasina kusarudzika kwemavara (kunyanya nhema) uye mashoma kukora, asi neakanyanya kunyangwe kupfeka kusvika ku100% yekubatanidza pamusoro.
Vazhinji vevatengi vedu vanoziva zvakanaka nezve akasiyana mapendi / machira maitiro kune zvavanoda zvinoratidza izvo chaizvo nzira mune yavo marongero.